के अमेरिकामा मानव अधिकार छ ? - Nepal Readers
के अमेरिकामा मानव अधिकार छ ?
“अमेरिकामा मानवअधिकारको स्थिति कमजोर र खराब हुँदै गएको छ” चीनले शुक्रबार अमेरिकामा मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गरेको छ। विगतमा मानव अधिकार हनन भइरहेको आरोप खेपी रहेको चीनले केही तथ्यका साथ हाल अमेरिकामा विभिन्न सात पक्षमा मानव अधिकार हनन भइरहेको पुष्टि गर्न खोजेको छ।
उक्त कुरा “२०१९ मा अमेरिकामा मानवअधिकार उल्लंघनको अभिलेख” शीर्षकको प्रतिवेदन प्रकाशितमा उल्लेख छ। राज्यको काउन्सिल सूचना कार्यालय द्वारा प्रकासित सो रिपोर्ट अमेरिकामा मानवअधिकार रेकर्ड सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रकाशित डाटा र मिडिया रिपोर्टमा आधारित छ।
यो रिपोर्ट अप्रिल १५, २०१९ मा अमेरिकाका विदेश मंत्री माइक पोम्पीओको उद्धरणबाट शुरु गरिएको छ: “हामीले झूट बोलेका थियौं, हामीले धोका दियौं, हामीले चोरी गरेका थियौं … यसले तपाईंलाई अमेरिकी अभ्यासको गौरवानुभूति गराउँछ।”
“अमेरिकी राजनीतिज्ञहरुको टिप्पणीले मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने र वर्चस्व कायम राख्न प्रयोग गर्ने तिनीहरूको पाखंडलाई पूर्णरुपमा उजागर गरेको छ”।
नागरिक र राजनीतिक अधिकार: २०१९ मा मात्रै ४१५ को बन्दुकको हत्या घटना
उक्त प्रतिवेदन अनुसार बन्दुक राख्ने अधिकारमा प्रतिबन्ध नहुँदा बन्दुकको हिंसा बढेको छ र यसले अमेरिकामा नागरिकको ज्यान र सम्पत्ति सुरक्षालाई गम्भीर खतरा देखाएको छ।
संयुक्त राज्यमा सामूहिक हत्या भएको घटनाको संख्या २०१९ मा ४१५ पुगेको छ र यो बर्षमा हरेक दिनमा एक भन्दा बढी घटना भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसरी अमेरिकामा २०१९ मा बन्दुक चलाएर जम्मा ३९०५२ मानिस मारिए। यसरी अमेरिकामा २०१९ मा हरेक १५ मिनटमा एक व्यक्ति मारिन्छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि पार्टीको राजनीति, चुनावी राजनीति र पैसाको राजनीति एक अर्कामा गाँसिने हुनाले अमेरिकाका विधायिका र कार्यकारी अधिकारीहरुलाई बन्दुक नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ। यसो हुँदा स्थिति काबूभन्दा बाहिर गएको कुरा रिपोर्टले औंल्याएकोछ।
सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार: एक मात्र विकसित देश जहाँ लाखौं मानिस भोकै हुने गरेका छन्
सन् २०१८ मा अमेरिकामा धनी र गरिबको बिचको खाडल ५० वर्ष अघिको बेलामा जस्तो देखियो। रिपोर्टका अनुसार देशको गीनी सूचकांक ०.४८५ थियो।
अमेरिकामा आर्थिक असमानता
सन् २०१८ मा, सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले कुल घरेलू सम्पत्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। निर्धनहरुले विगत ३० वर्षदेखि सम्पत्ति बचत गर्न नसकेको देखिएकोछ।
२०१८ मा करीव ३ करोड ९७ लाख जनता गरिबीमा थिए तर अमेरिकी कग्रेसले प्रति घण्टा न्यूनतम ज्याला ७.२५ अमेरिकी डलर एक दशकदेखि कायम रहेको तलवमानमा बृद्धि गर्न अस्वीकार गरेको छ।
यसै बीचमा, संयुक्त राज्य अमेरिका र यस्तै विकसित अन्य मुलुकहरुबीचको स्वास्थ्य स्तरमा बृद्धि हुने क्रम जारी छ, किनकि २०१८ को अन्त्यमा १३ प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूको बिमा नै हुन सकेको थिएन। जबकी यसै बीचमा, संयुक्त राज्य अमेरिका र समान विकासको देशहरूबीचको स्वास्थ्य बिरामी बढ्न जारी छ, २०१६ को अन्तमा १०.९ प्रतिशतमात्र विमित थिएनन् रिपोर्टले भनेको छ।
जातीय अल्पसंख्यकहरूमाथि भेदभाव: अमेरिका एक गोरा एङ्गग्लो-स्याक्सन प्रोटेस्टेन्टहरूको देश
संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि गोरा एङ्गग्लो-स्याक्सन प्रोटेस्टेन्टहरूको देश हो। त्यहाँ अन्य सबै जाति, जनजाति समूहहरू, र धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायहरूले विभिन्न स्तरका विभेदहरू सहिरहेका छन्, रिपोर्टले भनेको छ।
दासत्व र जातीय पृथककरणको अवधारणाको रूपमा, अफ्रिकी­ मूलका अमेरिकी वयस्कहरू गोरा वयस्कहरू भन्दा ५.९ गुणा बढी कैदमा पर्ने सम्भावना छ। यसले अमेरिकी मूल निवासीहरूको अधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि प्रकाश पार्दछ, जसले सामान्यतया बढी मृत्यु, गरिबी र उच्च बेरोजगारी दर भोग्नु परेको छ।
महिला विरुद्ध भेदभाव र हिंसा: हत्या, यौन दुर्व्यवहार
अमेरिकामा समानस्तरका अन्य मुलुकहरुका महिलाहरूको तुलनामा २१ गुणा बढी हतियारले मारिएको देखिन्छ। महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सो रिपोर्टमा बताइएको छ।
अमेरिकामा महिलाहरूले अझै पनि व्यवस्थित, व्यापक र संस्थागत भेदभावको सामना गरिरहेछन्, जुन विभिन्न रूपहरूमा प्रचारमा आएका र गोप्य स्तब्ध पार्ने लैंगिक भेदभाव हुनेगरेको रहेको छ, रिपोर्टले भनेको छ।
कमजोर वर्ग वा समूहको जीवन : कुनै सुधार छैन
प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी चरम गरिबीको स्तरमा नाटकीय रूपमा कमी आएको छ, तर अमेरिकाका बच्चाहरूको गरिबी अनुपात ३० बर्ष पहिले जस्तै छ।
यसले यो पनि औंल्याएको छ कि अपाङ्गता भएका चार मध्ये एक अमेरिकीले रोजगारी पाउन र वित्तीय सुरक्षा स्थापित गर्न बेग्लै खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ।
आप्रवासीहरूमाथिको दुर्व्यवहार: ‘शुन्य-सहिष्णुता‘ नीति र दुर्व्यवहार
हालसालैका वर्षहरूमा, अमेरिकी सरकारले आप्रवासीहरूका बिरूद्ध कडा र अमानवीय कदम चालेको छ, खासगरी “शून्य सहिष्णुता” नीतिले गर्दा धेरै आप्रवासी परिवारको बिछोड भएको रिपोर्टमा छ।
यसले आप्रवासीहरूका लागि नजरबन्द गरिने स्थलहरुमा गम्भीर दुव्र्यवहारहरू हुने गरिएको उल्लेख छ, जसमा उनीहरुलाई लठ्याउने सूई दिइने, हथकड लगाइने र ओड्ने तथा लगाउने कपडा नदिइने कुरा समेत छन्।
मानव अधिकारको अमेरिकाद्वारा विश्वभर उल्लंघन: प्रतिबन्धहरु, युद्धहरु र अन्य
उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ, अमेरिका हाल पनि इराक, अफगानिस्तान, सिरिया र यमनमा युद्धमा संलग्न रहेको छ।
यसले औंल्याउँछ कि क्युवाको बिरूद्ध आर्थिक नाकाबन्धी र अमेरिकाले लगाएको भेनेजुएला बिरूद्ध एकतरफा प्रतिबन्ध यी देशका जनताहरुको मानव अधिकारको ठूलो र स्पष्ट उल्लंघन हो।
साभारः सिटिजिएन २०२० मार्च १३ मा प्रसारित।